Dekadda Ber-Bera oo wax shaqo ah ka socon & DP World oo walaac ka muujisay amaanka Bosaso – DMS
HomeWararkaDekadda Ber-Bera oo wax shaqo ah ka socon & DP World oo walaac ka muujisay amaanka Bosaso
Dekadda Ber-Bera oo wax shaqo ah ka socon & DP World oo walaac ka muujisay amaanka Bosaso
Dekedda magaalada Ber-Bera ayaan maanta wax shaqo ahi ka socon kadib markii ganacsatadii wax kala soo degi jiray ay joojiyeen isticmaalkeeda.
Ganacsatada ayaa ka cabanaya lacago xad dhaaf ah oo shirkdda DP World ee maamusha dekedda ay ku kordhisay cashuurta laga qaado ganacsatada, taas oo sababtay in uu cirka isku shareero sarifka lacagta Somaliland oo gaadhaya 8500 oo shilinka Somaliland ah halka wixii ka horeeyay 12-ka bishan uu ahaa 7000 oo kaliya.
Kulan haatan u socda gudi ganacsata ah ayaa looga hadlayaa xiisada ka dhalatay go’aanka shirkadda DP World ay ku kordhisay cashuurta oo hakad galisay hawlihii shaqo ee dekadda.
Dhanka kale qaar kamid ah shaqaalaha shirkadda DP World ee ku sugan magaalooyinka Boosaaso iyo Ber-Bera ayaa sheegay in noloshooda ay halis ku jirto xilli walba kadib markii dhawaan la dilay madaxii shirkadda ee dekadda magaalada Boosaaso.
Madaxa DP World Sultan Ahmed bin Sulayem ayaa u sheegay Wakaalada Wararka ee AP in shaqaalaha ay bilaabeen in ay kasoo baxaan Soomaaliya kuwooda ajaanibta ah kadib markii ay la kulmeen hanjabaado kala duwan.
Waxa uu xusay in ay wax badan ka badali doonaan hanaanka amaanka ee shaqaalaha, taas oo abuurtay cabsi xoogan kadib dilkii maamulihii shirkadda P&O Paul Faramosa Bishii February oo hoostagta shirkadda DP World oo gacanta ku haysa maamulka dekaddaha Boosaso iyo Ber-Bera.
DEG DEG:Ciidamo ka tirsan Puntland oo iskaga baxay deegaanka Gal-gala ee gobolka Bari
SAWIRO:Qaab nooce ah ayaa loogu soo dhoweeyey Muqdisho madaxweynaha Jabuuti?